Ion gudbiye / Ion Sensor Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Ion Transmitter / Ion Sensor Factory
Khadka Tooska ah ee Ion Meter T4010
Warshadaha khadka tooska ah ee Ion ee mitirka waa kormeerka tayada biyaha ee internetka iyo aaladda xakamaynta oo leh microprocessor. Waxaa lagu qalabeyn karaa Ion
dareeraha xulashada ee Fluoride, Chloride, Ca2 +, K +, NO3-, NO2-, NH4 +, iwm
Warshadaha khadka tooska ah ee Ion ee mitirka waa kormeerka tayada biyaha ee internetka iyo aaladda xakamaynta oo leh microprocessor. Waxaa lagu qalabeyn karaa Ion dareeraha xulashada ee Fluoride, Chloride, Ca2 +, K +,
NO3-, NO2-, NH4 +, iwm
Khadka Tooska ah ee Ion Meter T6510
CS6514 Dareemayaasha Amooniyam
Ion xulashada korontada waa nooc ka mid ah dareeraha koronto kiimikada ee adeegsada kartida xuubka si loo cabbiro waxqabadka ama fiirsashada ion ee xalka. Markay xiriir la yeelato xalka ay ku jiraan ion-yada la cabirayo, waxay abuuri doontaa xiriir uu la yeesho dareeraha isku xirka xuubkiisa xasaasiga ah iyo xalka. Waxqabadka Ion wuxuu si toos ah ula xiriiraa awooda xuubka. Ion korantada xulashada waxaa sidoo kale loo yaqaannaa korantada xuubka. Noocan koronto wuxuu leeyahay xuub koronto oo qaas ah oo si xul ah uga jawaaba ion qaas ah. Xidhiidhka ka dhexeeya awooda xuubka korantada iyo nuxurka ion ee la cabirayo waxay u dhigantaa qaaciddada Nernst. Noocan koronto wuxuu leeyahay astaamaha xulashada wanaagsan iyo waqtiga isu dheelitirka, taas oo ka dhigaysa tilmaame koronto tilmaame inta badan la adeegsado falanqaynta suurtagalka ah.
CS6518 Sensor-ka Kalsiyum
Kaalshiyamka koronto kaalshiyamka ah waa xasaasiyad xasaasi ah oo loo yaqaan 'PVC membrane calcium ion electrode xulasho leh cusbo fosfooris dabiici ah oo ah maaddada firfircoon, oo loo isticmaalo in lagu cabbiro isku-uruurinta Ca2 + ions ee xalka.
CS6718 Sensor Hardness (Kaalshiyam)
Codsiga kaalshiyamka ion kalsiyum: Habka kalsiyum ee xulashada koronto waa hab wax ku ool ah oo lagu go'aamiyo kaalshiyam-ka ion ka kooban shaybaarka. Kaalshiyam-ka ion kala xulashada korantada sidoo kale waxaa badanaa loo isticmaalaa aaladaha qadka, sida kormeerka waxyaabaha kaalshiyamka ah ee warshadaha khadka tooska ah, kaalshiyamka xulashada koronto wuxuu leeyahay astaamaha cabirka fudud, jawaab dhaqsaha iyo saxda ah, waxaana loo isticmaali karaa pH iyo mitir ion iyo kaalshiyamka internetka. falanqeeyayaasha Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa qalabka baarista korontada ee xulashada falanqeeyayaasha korantada iyo falanqeeyayaasha cirbadaha qulqulka.
Dareemaha khadka tooska ah ee loo yaqaan 'chloride ion sensor' wuxuu adeegsadaa xuubka adag ee xuubka xuubka si loo tijaabiyo ion chloride-ka biyaha dul sabeynaya, taas oo ah mid deg deg ah, fudud, sax ah oo dhaqaale leh.
Korontada loo yaqaan 'CS6520 Nitrate'
Dhammaan korantadayada 'Ion Selective (ISE)' waxaa lagu heli karaa qaabab iyo dherer fara badan si ay ugu habboonaadaan noocyo kala duwan oo codsiyo ah.
Kuwani Electrodes Xulashada Ion waxaa loogu talagalay in ay la shaqeeyaan mitir kasta oo pH / mV casri ah, ISE / mitirka fiirsashada, ama qalab ku habboon on-line.
Waxqabadka TDS Sensor, Dareeraha Dareemida Isukeenista Daawaha Titanium, Feeraha Dareeraha Fududeeyaha, Quadrupole Shaxanka Samaynta Iskuduwaha Sawirka, Sensor-ka Electromagnetic, Chlorophyll Sensor,